The Black Swan na ahụekere butter na jelii Sandwiches | Martech Zone
Izu-ụka ole na ole gara aga, ejiri m ọrụ mee nyocha nke blog m iji hụ ọkwa ọkwa ọ edere ya. O juru m anya na saịtị ahụ dị na ọkwa Junior High School. Dịka onye na-agụ akwụkwọ na blogger na-anụ ọkụ n'obi, m kwesịrị ịdị na-eme nke ọma karịa Junior High School, ọ bụghị ya? N’iburu ya n’obi, atụghị m anya na m nwere ihe ọ bụla ga-eme m ihere.
Etu esi emee ahuekere achicha na jelii sandwich
Otu n'ime ndị prọfesọ Bekee kachasị amasị m meghere klas anyị otu oge, Otu esi emee ahuekere ahukere na jelii sandwich. Anyị nwere ezigbo minit 30 iji dee ntuziaka, na echi ya, ọ tụrụ anyị n'anya site na iweta ite mmanụ a peụ, jelii, achịcha, na mma butter.
Ezigbo prọfesọ anyị malitere ịgbaso ntuziaka ndị ahụ wee mee sandwiches. Ngwaahịa ngwụsị bụ ọdachi na ntuziaka dị nkenke dị ka nke kachasị nkọwa. Ikekwe ihe kachasị mma bụ ndị na-ekwutụbeghị iji mma ma ọlị. Ọ bụ klaasị Bekee mbụ m weere nke mere na m pụọ na afọ mgbu site n'ịchị ọchị nke ukwuu. Isi ihe nke ihe mmuta diri m.
Obere ahịrịokwu, nkọwa dị nkenke, okwu dị mfe na obere isiokwu nwere ike iduga gị na ọkwa Ọgụgụ nke Junior High School, mana ọ na-emepekwa blọọgụ gị (ma ọ bụ akwụkwọ) gị ruo ọtụtụ ndị na-ege ntị ga-aghọta ozi a. Echere m na ọ bụrụ na m nwere ihe mgbaru ọsọ maka ọkwa ịgụ na blọọgụ m, ọ nwere ike ịbụ obere ụlọ akwụkwọ sekọndrị! Ọ bụrụ na m nwere ike ịkọwapụta teknụzụ m na-arụ ọrụ na onye dị afọ 15, mgbe ahụ onye dị afọ iri anọ nwere ike igwu ya!
Black Swan nke Nassim Nicholas Taleb dere
O bu n’udi ka m ji emeghe akwukwo dika Black Swan ma enweghị ike ịfefe peeji 50 mbụ na ọnwa nke ọgụgụ. Dị ka otu Nkwupụta Amazon tinye ya:
[E wezụga isi nke 15 ruo 17]… Ihe fọdụrụ n’akwụkwọ a na-akụda mmụọ. Enwere ike ichikota otutu peeji site na ikwuputa na anyi apughi ikwu ihe omume di obere.
Chei! Daalụ ịdị mma abụghị naanị m! Akwụkwọ a na-egbu mgbu. Ka a sịkwa ihe mere ndị mmadụ ji enwe ekele maka blọọgụ n'oge a. Anaghị m achọ ide akwụkwọ kacha mma New York Times ma ọ bụ na m na-achọ ịmasị onye Ivy-leaguer. Naanị m na-anwa ịkọwa ihe a dịka m nwere ike ka m nwee ike ịkekọrịta ya ma nwee ike ịghọta ya.
Okwu m nwere ike iji kọwaa Black Swan: bombastic, chatty, diffuse, discursive, flatulent, gabby, garrulous, inflated, ogologo, ogologo-winded, loquacious, palaverous, pleonastic, prolix, rambling, ejighi oru, na-ekwu okwu, na-agwụ ike, turgid, verbose, voluble, ikuku. (Daalụ Thesaurus.com)
Ọ bụrụ na Taleb dee Otu esi emee ahuekere ahukere na jelii sandwich, prọfesọ m ka nwere ike na-arụ ọrụ na ya - na o nwere obi abụọ ọ ga-adị ka Sanwichi ma ọlị.
Nke ahụ kwuru, m ga-alaghachi wee were ndụmọdụ nke onye nkatọ ahụ wee gụọ Isi nke 15 ruo 17. Ma eleghi anya ezigbo bọebụeekere na jelwukii dị mma! Maka nyocha ọkwa ọgụgụ, atụla ezigbo anya… otu paragraf etinyere na thesaurus nwere ike ime ka ị ghara ịma ọkwa. 😉
Tags: akwụkwọ ahịaakụkọ ifonwa nnụnnụ mmiri
Dee 3, 2007 na 8: 24 AM
N'ezie, dị ka ndị ọkachamara na-ede akwụkwọ si kwuo, ime "mma" ga-abụ ide ihe na ọkwa ọkwa dị ala. Nkezi ọkwa ọgụgụ na mba a bụ klaasị 6, a na-edekwa akwụkwọ akụkọ niile n'ọkwa ahụ. Ezigbo ndị na-ede nzikọrịta ozi ahịa ga-edekwa n'ọkwa a, karịa n'ọkwa dị elu. Ọ na-eme ka nnomi ha dị mfe ịgụ na ịghọta, ya mere ọ na-ewepụ nsogbu niile na ndụ anyị, ya mere, ọ ga-abụ na ọ ga-eme ka ọ kwenye. (Ha anaghịkwa ekwu “ma otu a.”)
M na-agụkwa Black Swan, ọ na-ewutekwa ya. A sị m na ị biputere blọgụ a ihe dịka isiakwụkwọ ise gara aga wee zọpụta m n'ime ahụhụ a.
Dee 3, 2007 na 9: 50 AM
Gọzie gị Doug na onye na-ekwu okwu gị maka ihe ị mere na Black Swan. Ọ nwere otu mmetụta na m dị ka a coupla Seconals–10 nkeji na akwụkwọ na m na-arahụ. N'abalị ụnyaahụ, agara m ala na 8:45!
Nwa gị nwoke Nassim bụ ihe m na-akpọ SAKIA-smart ass mara-ihe niile. Ọ na-akwadokwa nkọwa ọrụ m nke elu-brown-onye agụmakwụkwọ ya karịrị ọgụgụ isi ya. Mmadụ kwesịrị ịkwa akwa punk a mara mma - na-ahapụ ndụmọdụ $100 maka cabbies.
Dị ka econ isi na-agbake, anyị na-enwebu aha maka Black Swans. Anyị kpọrọ ha “ihe omume dịpụrụ adịpụ”, na mgbe niile, ha na-emebi echiche amụma amụma niile dị mma. Econ majors nwere nghọta karịa nke ihe ndị a - ihe omume ndị a na-atụghị anya ya bụ ihe a na-atụghị anya ya.
Dee 3, 2007 na 9: 51 AM
Dị ka Derek kwuru banyere akwụkwọ akụkọ wdg, m na-agụ ebe (ama las okwu ziri ezi:) na TIME na-agba maka ọkwa 6th-7th grade agụ mgbe ha na-ede akụkọ ha iji mee ka ọ dịrị mmadụ niile mfe ịgụ.
Ụfọdụ n'ime akwụkwọ kachasị mma m na-agụ na blọọgụ dị iche iche bụ ahịrịokwu ole na ole nke nwere ihe ọ pụtara, echere m na Seth Godin bụ onye isi nke a.
Dee 4, 2007 na 4: 59 AM
Enwekwara m "Junior High".
Kedu ka m ga-esi mara ma saịtị ahụ na-arụ ọrụ? Enwere blọọgụ a maara maka ịgụ ihe siri ike?
Dee 12, 2007 na 1: 46 AM
Echere m Black Swan nwere ike dabara maka ndị na-ere ahịa n'ihi nghọta ya n'ezie ihe ize ndụ anyị chere ihu ugbu a n'ahịa taa. N'akwụkwọ a, ị ga-amụtakwu banyere ike na njikwa karịa ebe ọ bụla ọzọ. Ike na njikwa na-enweta ihe ọjọọ - mgbe niile, ndị na-ere ahịa na-eme ka ndị mmadụ kwenye kwa ụbọchị na ndị a bụ àgwà abụọ mara mma na-ekweta? Echere m.
Ọ bụghị ọgụgụ dị mfe mana ọ ga-akwado nke a maka ndị na-eme mkpebi nke ụdị ọ bụla.